« Nametra-pialana ny praiminisitra », hoy ny Prezidansa… : « Hiala amin’ny fotoana mahamety azy aho », hoy Ravelonarivo | NewsMada
« Nametra-pialana ny praiminisitra », hoy ny Prezidansa… : « Hiala amin’ny fotoana mahamety azy aho », hoy Ravelonarivo
Miseho ny disadisan’ny samy mpitondra. Nambaran’ny eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika, omaly teny Iavoloha, fa nametra-pialana, omaly ny praiminisitra Ravelonarivo sy ny governemanta. Namaly izany ny tenany, ny hariva. « Tsy mbola nametra-pialana aho saingy hanao izany amin’ny fotoana maha mety azy », hoy izy teny Mahazoarivo.
“Ekena ny fametraha-pialana atolotry ny Praiminisitra Ravelonarivo Jean amin’ny anarany manokana sy amin’ny anaran’ny governemanta”, hoy ny fanambarana novakin’ny sekretera jeneralin’ny fiadidiana ny Repoblika, ny jeneraly Ralala Roger, tamin’ny mpanao gazety, teny Iavoloha, omaly.
Voalazan’ny fanambarana fa miantoka ny fampandehanan-draharaha andavanandro ireo mpikamban’ny governemanta nametra-pialana, araka izay tandrify azy, mandra-pitsangan’ny governemanta vaovao.
Valin-kafatra avy eny Mahazoarivo
Tsy niandry ela ny praiminisitra Ravelonarivo, namaly izany teny Mahazoarivo, nanoloana ny mpanao gazety, nitatitra ny fihaonany amin’ny filoham-pirenena teny Iavoloha. ”Nikaondoha izahay ary niresaka ny raharaham-pirenena sy ny fandaharanasan’ny fitondrana. Nangataka ahy ny hanaovako fametraham-pialana ny filoha avy eo, saingy nangataka aho fa mbola hiera amin’ny fianakaviako, mialoha ny hanaovako sonia izany… Gaga anefa aho eny an-dalana maheno fa nametra-pialana. Hatreto aloha, tsy mbola nanao izany aho, saingy mbola hiverina eny hanasonia izany amin’ny fotoana mampety azy noho ny tombontsoam-pirenena”, hoy izy.
Voaporofo ny tsy fifankahazoan’ny roa tonta
Mihantona eo aloha izany ny toe-draharaha eo amin’ny roa tonta. Hanao ahoana ny ho tohin’izao, manomboka eto ?
Na inona na inona anefa aloha hambara, vaky am-batolampy tanteraka ny tsy fifankahazoana eo amin’ny filoha Rajaonarimampianina sy ny praiminisitra Ravelonarivo. Na Iavoloha sy Mahazoarivo koa. Zary lasa mifanala baraka ?
Niatrana ny miaramilan’i Mahazoarivo
Tsy maintsy miafara amin’ny fametraham-pialana ihany koa anefa ny raharaha, rehefa tsy mitovy intsony ny tadin-dokanga.
Nialoha ny fanambaran’ny praiminisitra, anisan’ny tazana teny an-toerana ireo manamboninahitra ambony eo anivon’ny Foloalindahy. Tsy fantatra na nihaona manokana tamin’ny lehiben’ny governemanta izy ireo na tsia. Niatrana koa ireo mpiambina an’i Mahazoarivo, manontolo. Tazana lavitry ny lapa, eny amin’ny tobin’ny zandary kosa ny avy amin’ny Emmo/Reg.